Home Wararka Gawaari galabta odoyaal ka qaaday Dhuusamareeb una qaaday Gaalkacyo
Gawaari galabta odoyaal ka qaaday Dhuusamareeb una qaaday Gaalkacyo
Waxaa galabta ka baxay magalaada Dhuusamareeb qaar ka mida odoy dhaqameedka rasmiga ah ee ka soo jeeda beelaha degan Galmudug. Odoyaashaan oo ka soo horjeestay qaabka loo magacaabay xildhibaanada una arka in wixii ka dhacay Dhuusamareeb ay ahayd ku tagrifalid uu sameeyay Xasan Kheyre, ayaa la filayaa in ay ku hiiraan maamulka uu dhisayo Madaxweye Axmad Ducaale Xaaf.
Sida MOL ay u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah, waxaa sidoo kale la filayaa in maalmaha soo socda in qaar kale oo kamida odoyaasha iyo waxgaradka reer Galmudug ay u safri doonaan magalaada Gaalkacyo.
Sida ay horay uga digtay beesha Caalamka, waxaa Galmudug ka dhsimi doono labo maamaul oo kala duwan kuwaas oo ay kala hogaamiyaan labo madaxweyne. Talabadaan ayaana keeni doonta in Galmudug gasho xaalad cusub oo hor leh taas oo keeni doonta in dagaal ka dhex qarxi dadka ku dhaqan degaankaas.